Ukubheja kuma-cardigans athungiwe ukudala izingubo zokuvuna | Bezzia
UMaria vazquez | 05/04/2021 18:00 | Ngigqokani, Amathrendi
Ngabe unezinto ekhaya ongazigqokile amashumi eminyaka? Isikhathi sesifikile sokuphenya ngalaba ukuze sinikeze labo ithuba ama-cardigans aboshwe ngesandla ukuthi sonke sibe nakho noma okungenani sonke esineminyaka yobudala edingekayo.
Uma unayo, unenhlanhla! Ungakha izitayela zokuvuna mkhuba futhi unikeze impilo yesibili kuleyongubo. Akufanele ubeke izinto na? Ungakhathazeki, ngeke ube nankinga yokuthola eyodwa oyithandayo kumaqoqo ezemfashini amanje ngoba, njengoba simemezele ezinyangeni ezimbalwa ezedlule, zingenye yezindlela zesizini.
Ngezintambo ezivulekile, izimbali ezifekethisiwe, imidwebo eshintshiwe noma ama-trim ahlukile. Ama-cardigans alukiwe aphefumulelwe ukuvuna zijwayele le sizini. Futhi njengomkhuba, ungabathola emaqoqweni amafemu wemfashini afana neZara, iMango noma i-Asos.
Ngemibala engathathi hlangothi noma nge-pastel shades ethambile Bazobamba iqhaza elikhulu ezingutsheni zalesi sizini sasentwasahlobo-ehlobo sango-2021. Futhi ngeke kudingeke ukubenza babe nzima ukuze babahlanganise nalaba. Eqinisweni, ukuwahlanganisa nejean kuyindlela ethandwa kakhulu phakathi kwama-instagramers.
Ijini ne-cardigan, ngeke udinge okwengeziwe kule ntwasahlobo. Ukuqedela ukubukeka noMary Janes noma izicathulo ezithende eziphansi zeT-Bar kanye nebhasikidi lesandla, njengoba uLouisa Durrell angenza, uzofinyelela ukubukeka okuphefumulelwe ukuvuna okulungele ukusetshenziswa kwansuku zonke.
AmaCardigans anokukhanya noma ukuvuleka kumathoni angathathi hlangothi nawo afanele ukugqokwa ngaphezulu kwezingubo noma iziqongo ezinezimbali. Futhi uma ufuna isitayela esiphefumulelwe ngamashumi ayisikhombisa, kuzodingeka uhambe ngesiketi esincane esivuthayo kanye nekhadididi e-plaid efanayo, ungalokotha?
Ngaphezu kokukusiza ukuthi udale ukubukeka kwamavintage kule sizini, lawa ma-cardigans ingenakhola futhi iboshwe ngaphambili Zizoba wusizo olukhulu lapho kufika ihlobo. Siyaqiniseka ukuthi uzothola okuningi kubo kunalokho ucabanga. Ingabe ujoyina lo mkhuba?
Izithombe - @djzinhle, @mzokoloko, @lungile_buthelezi, @sbahle_mpisane, @sbahle_mpisane, mthokozisi, @mzokoloko, @sbahle_mpisane, @nonhlanhla_Nox
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » imfashini » Ngigqokani » Ukubheja kuma-cardigans athungiwe ukudala izingubo zokuvuna